यी २ राशिको भाग्य चम्किदै ! हट्दैछ अर्काे महिना शनिको प्रभाव ! - News 88 Post
शनिको साडेसातीको शिकार हुनाले जीवन धेरै दुःखले भरिन्छ। २ राशिका मानिसहरुलाई साउनदेखि शनिकाे प्रभावबाट राहत मिल्ने छ । यससँगै यस राशिका जातकले आफ्नो करियरमा एकपछि अर्को सफलता पाउन थाल्नेछन् ।
१२ जुलाई २०२२ मा शनि ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछ। याे ग्रह कुम्भ राशिबाट बाहिर निस्केर प्रतिगामी भएर मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ । प्रतिगामी शनिको गोचरले सबै मानिसको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यो प्रभाव शुभ वा अशुभ हुन सक्छ। साथै शनिको साढेसाती चलिरहेको राशिमा पनि शनिको राशि परिवर्तनको प्रभाव पर्नेछ ।
शनि गोचरले २ राशीको ढैय्या समाप्त हुनेछ : अहिले शनिदेव कुम्भ राशीमा रहेकाले कर्कट र वृश्चिक राशिका मानिसहरूलाई शनिदेवले प्रभाव पार्ने छ । यी राशिहरूमा शनि संक्रान्तिपछि 29 अप्रैलबाट ढैय्या सुरु भएको हो ।
मिथुन र तुलासँगै ढैय्या पनि सकिएकाे छ । तर पुन: प्रतिगामी शनि मकर राशिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मिथुन र तुला राशिका मानिसहरूमा फेरि सुरु हुनेछ। साथै कर्कट र वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरुलाई धैय्याबाट राहत मिल्नेछ ।
कर्कट- वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले ठूलो सफलता मिल्नेछ : साउन १२ गते शनि मकर राशिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै कर्कट र वृश्चिक राशिको धैर्यको अन्त्य हुनेछ। यसबाट उनीहरुलाई आफ्नो काममा सफलता मिल्नेछ । रोकिएका कामहरु सुचारु हुनेछन् । रोकिएको धन फिर्ता हुनेछ ।
बढुवा-बृद्धि रोकिएको भए अहिले दिन सकिन्छ । तनाव र शारीरिक पीडा कम हुनेछ। यदि कुंडलीमा शनि राम्रो स्थितिमा छ भने यसले धेरै लाभ दिनेछ। यस अवधिमा शुभकर्म गर्नाले शुभ फल बढ्नेछ, त्यसैले गरिबको सहयोग गर्नुहोस्।
यी ४ राशिका मानिस सबैभन्दा रोमान्टिक मानिन्छन्, बन्छन् सबैभन्दा राम्रो प्रेमी
राशि चक्रबाट कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित धेरै रोचक कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। हरेक मानिसको स्वभाव र रुचाइ र मन नपराउने फरक हुन्छ । प्रत्येक राशिका मानिसमा केही न केही विशेषता हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरूलाई बाँकी राशिभन्दा फरक बनाउँछ। आज हामी त्यस्ता केही राशिको बारेमा कुरा गर्नेछौं। जससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बढी रोमान्टिक स्वभावका मानिन्छन्।
वृश्चिक: यो राशिका मानिसहरु निकै रोमान्टिक स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो प्रेमी साथीलाई खुसी बनाउन नयाँ–नयाँ उपाय खोजिरहन्छन् । उनीहरु सबै भन्दा राम्रो प्रेम साथी बन्न कुनै कसर छोड्दैनन्। उनीहरुको लागि माया सबै भन्दा बढी लाग्छ। उनीहरु छिट्टै प्रेममा पर्दैनन् । तर जससँग सम्बन्ध बनाउनुहुन्छ, उसलाई आफ्नो बनाएर मात्र सास फेर्छन्।
मेष: यो राशिका मानिसहरु उर्जाले भरिपूर्ण हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टनरसँग रोमान्स गर्ने मौका कहिल्यै छोड्दैनन् । तिनीहरू इमानदारीपूर्वक आफ्नो सम्बन्ध खेल्छन् र सबैभन्दा राम्रो प्रेम साथी बन्छन्।
सिंह : रोमान्सको मामिलामा, यो राशिका व्यक्तिहरूको लागि कुनै जवाफ छैन। उनीहरूले रोमान्सको नयाँ तरिका खोज्छन्। उनीहरुको पार्टनरले उनीहरुसँग कहिल्यै बोर महसुस गर्न सक्दैन। किनभने तिनीहरू आफ्नो प्रेम जीवनलाई ताजा राख्नको लागि केहि विशेष गर्दैछन्। उनीहरु आफ्नो पार्टनरको भावनाको पूर्ण ख्याल राख्छन् ।
धनु: यो राशिका मानिसहरु पनि निकै रोमान्टिक स्वभावका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो प्रेम खुलेर व्यक्त गर्न हिचकिचाउँदैनन् । उनीहरु आफ्नो पार्टनरलाई खुसी बनाउन नयाँ आइडिया ल्याउँछन् ।
सांसद नै नरहेका बन्दीलाई देउवाले बनाए कानून मन्त्री
April 7, 2022 N88
June 6, 2022 N88
श्रीमान बिदेश हुदा छोरा जन्माईदिन्छु भन्दै जेठाजुले यस्तो सम्म गरेछन्, रूँदै मिडियामा पीडित महिला (भिडियाेसहित)